बुराउँसेको बसाइ - गन्तब्य - कान्तिपुर समाचार
- कञ्चन अधिकारी
मंसिर १७, २०७३-भोटे लामाको बाक्लो बस्ती छ बुराउँसे गाउँमा । हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट बजारबाट करिब ४५ मिनेट पैदल पुग्न सकिन्छ यो ठाउँ । हुन त बुराउँसे र सिमकोट बजार एउटै गाविसमा पर्छन् । सिमकोट गाविस वडा नं. ७ र ८ को बस्ती हो यो । यसको उचाइ छ २९६० मिटर । जनसंख्या ६०० ।
६ दिनको लगातार हिँडाइले लखतरान भएका हामीलाई स्थानीयले ३० मिनेटमा पार गर्ने दूरी १ घण्टै लाग्यो । सहरमा जस्तो धूलो, धूवाँ थिएन । बिहानैदेखि छ्याङ्ग खुलेको नीलो आकाश थियो । चारैतिर खुलेकाले हामी रमाइलो मान्दै तर पाँयातरपाँया बुराउँसे जाँदै छौं ।
बुराउँसे पुग्दा भोटे पहिरनमा सजिएर, हातमा खादा लिएर बसेका रहेछन् आमा–बा स्वागत गर्न । अघिल्लो दिन सिमकोटका स्थानीय पत्रकार राजन रावतले ‘बिहानै खान खान आउँछौं है’ भनेर फोनबाटै खबर गरेका थिए । त्यही भएर असोजको दोस्रो साता कामको चटारो हुने भए पनि उनीहरू काममा नगईनगई हामीलाई कुरेर बसेका थिए ।
हामीलाई खादा लगाइदिएर स्वागत गरे उनीहरूले । गाउँ बीचमा सामुदायिक भवन छ । बच्चा जन्मेदेखि मर्दासम्म गरिने विभिन्न रीतिरिवाजको सजिलाका लागि गाउँले सबै मिलेर पायक पर्ने ठाउँमा भवन बनाएका रहेछन् । बच्चा जन्मेपछि गरिने पहिलो कर्म होस् या विवाह वा मरेपछिको, सबै यही भवनमा गर्छन् उनीहरू ।
यही भवनभित्र हामीलाई भोटे नाच अर्थात् स्याब्रु देखाए । उनीहरूले आफ्नै भाषामा गाएको गीत मीठो थियो । गाउँका अगुवा पामा तेन्जिङ लामा भने हामीलाई गीत अथ्र्याउँदै थिए । उनले भोटे गीतको भावानुवाद नेपालीमा गरिदिए ।
‘टाढा–टाढाबाट आउनुभएको यहाँहरूलाई स्वागत छ, अरू जिल्लामा विकास भइसक्यो, हाम्रो हुम्लामा कहिले विकास हुन्छ ? उकालो–ओरालो चढेर आयो होला, धेरै दु:ख पायो होला’ गीतको भाव यस्तै यस्तै छ,’ उनले छ्याङ घुट्क्याउँदै हामीलाई प्रस्ट्याए ।
परम्परागत गहनागुरियाले सजिएका गाउँलेहरू ४० जना जति थिए । महिला र पुरुष आलोपालो गाउँदै नाचे । नाच्ने सबै अलि उमेर ढल्केका पाकाहरू थिए । लामा भन्दै थिए, ‘गाउँका तरुनी तन्नेरी सहर पसिगाया, गाउँमा हामी बूढाबूढी मात्रै ।’
स्याउ बगान बुराउँसेको अर्काे विशेषता हो । स्याउ पाक्ने सिजन भएकाले हामी बोटबाटै टिपेर खान चाहन्थ्यौं । जिब्रो रसायो । हिँड्दाहिँड्दै टिप्न सकिने, घरको छतैबाट पनि टिपेर खान सकिने । मैले मन थाम्नै सकिन, हत्तपत्त घरको छतबाटै स्याउ टिपें र कोपरिहालें ।
आहा १ क्या रसिलो, मीठो स्याउ । गाउँले प्रतिगोटा ५ रुपैयाँमा बेच्छन् । गाउँमा आइपुग्ने पाहुनाले दुई–चार वटा सित्तैमा पनि दिन्छन् । मन ठूलो छ गाउँलेहरूको ।
गाउँमा उवा, गहुँ, चिनु, फापर, आलु, फर्सी, मूला, काउली, सागलगायत खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । पशुपालनमा झुमा, झोप्पा, गाई, घोडा आदि पाल्छन् । ओखर पनि राम्रै उत्पादन हुन्छ यहाँ ।
हुम्लाकै पहिलो सामुदायिक होमस्टे हो बुराउँसे । ग्रेट हिमालय ट्ेरल विकास कार्यक्रमले ६ वर्ष अघि आवश्यक तालिम दिएर हौस्याएपछि गाउँलेहरूले चार घरबाट होमस्टे शुभारम्भ गरेका थिए ।
अहिले दर्जन घरमा त्यस्तो सुविधा छ । गाउँलेले सफा ओढ्ने–ओछ्याउनेसहितका कोठा पाहुनालाई छुट्याएका छन् । चिटिक्क भाँडावर्तनले सजाएका छन् भान्छा । अर्गानिक खाना । फापरको लगड (रोटी), चिनोको भात, सिमीको दाल, तरकारी, मासु, छ्याङ, रक्सीदेखि दूध, दहीसम्म पाइन्छ । गाउँलेले हामीलाई चिनोको भात र च्याङ्ग्राको मासु खुवाए । एक जनाले एकछाक खाएको १ सय ५० रुपैयाँ लिन्छन् उनीहरू ।
युनेस्को, जिविस र गाविसको सहयोगमा बनाइएको सामुदायिक भवनमा सांस्कृतिक कार्यक्रम देखाउँछन् । त्यसमा स्याब्रु, बाक्पा, महांकाल नाच देखाउँछन् । यसको मूल्य तोकिएको छैन ।
पाहुनाले स्वेच्छाले दिएको रकम स्वीकार गर्छन्, गाउँबाट देखिने पञ्चमुखी हिमालझैं अनुहार उज्यालो पार्छन् । बुराउँसे पुग्न काठमाडौंबाट अलि कठिन छ । काठमाडौंबाट नेपालगन्ज बस वा हवाई यात्रा गर्नुपर्छ । नेपालगन्जबाट ५५ मिनेट हवाई यात्रा गरेर सिमकोट पुगेपछि करिब एक घण्टा पदयात्रा गरेर बुराउँसे पुगिन्छ । सिमकोटदेखि बुराउँसेसम्म सडक ट्रयाक खुलेको छ ।
प्रकाशित: मंसिर १७, २०७३
ह्वीलचियरमा नेपाल घुम्दै इजरायली ›
थप केही गन्तब्यबाट
यात्रा : केरुङ सपनाअसार १०, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
एउटा यात्राको आविष्कार ! जेष्ठ २७, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
यात्रा : क्युबामा चे र क्यास्त्रोको सम्झनाजेष्ठ २७, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
घुम्न जाने हो ? जेष्ठ २५, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
पौरखी गाउँ तकसेरावैशाख २३, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
घुमघामको रोजाइ कोठियाघाट
घुमघामको रोजाइ कोठियाघाटकार्तिक ३, २०७३पूरा पढ्नुहोस्
नाथुला हुँदै मानसरोवरअसार १२, २०७२पूरा पढ्नुहोस्
कैलाश क्षेत्रलाई विश्व सम्पदामा राख्न अध्ययनवैशाख ९, २०७२पूरा पढ्नुहोस्
गुराँसे वनमा रमाउँदैवैशाख ४, २०७२पूरा पढ्नुहोस्
लेकको वन ढपक्कै ढाक्यो रंगीन गुराँसले‌‌‌..चैत्र २७, २०७१पूरा पढ्नुहोस्